Ahiahy fihotsahana :: Miha betsaka ireo toerana tandindonin-doza eny Manjakamiadana • AoRaha
Ahiahy fihotsahana Miha betsaka ireo toerana tandindonin-doza eny Manjakamiadana
Miitatra ireo faritra mena tsy tokony hipetrahan’ny olona intsony eny amin’ireo faritra avo. Misy amin’ireo toerana tsy nasiana ny saina miloko mena no efa tsy tokony hijanonan’ny mponina.
Maro ireo olona no mandefa fitarainana amin’ireo toerana ahiana hisy fihotsahana na tohatohatra na lalan-kely eny amin’ny manodidina. Nanamafy ny tokony hialan’ireo olona mipetraka amin’ny tanàna tsy azo antoka ny tale jeneralin’ny Biraom-pirenena misahana ny loza voajanahary (BNGRC), ny jeneraly Elack Olivier Andriakaja.
“Mitombo ny faritra ahiana hianjera satria miharatsy ny toe-tany eny ambony eny. Tsy maintsy mihabetsaka ihany koa ny faharefoana amin’iny faritra iny satria ahiana hitera-doza. Anisan’ny olana mitoetra eny anefa ny tsy fahatsapan’ny olona fa tandindonin-doza izy raha tsy efa misy ny loza mitranga”, hoy ny jeneraly Elack Olivier Andriakaja nandritra ny fanomezana fanampiana ho an’ireo tra-boina nataon’ny vondrona “Khalifa Zayed Bin Al Nahyan” avy any amin’ny firenena Arabo mitambatra, teny Antanimora, omaly.
Anisan’ireo hahazo amin’io fanampiana io ny mponina any Morondava, tra-boina noho ny fiakaran’ny rano sy ny haitrano niseho tany an-toerana, miisa telo arivo eo ho eo. Fanampiana ho an’olonaebubhari sy arivo no natolotr’ity vondrona ity. Hisitraka izany ihany koa ireo iharan’ny hain-tany any Atsimo.
Nanamafy itsy tompon’andraikitra itsy fa tsy misy fisorohana loza mahomby afa-tsy ny fialan’ny mponina amin’ny tranony ihany. Milaza ny hanome vahaolana ho an’ireo fianakaviana tsy manan-kaleha ny BNGRC raha vonona ny hifindra any amin’ny toeran-kafa izy ireo. “Efa voafaritra ireo olona tokony hiala. Afaka manatona ny BNGRC misoratra anarana raha toa ka tsy manana aleha. Ny aty no mitady ny toerana hifindranareo. Misy amin’ireo miala rahateo no misafidy ny hihazo ny fianakaviany aloha”, hoy ny fanampim-panazavany.
Efa nisy ireo mponina niala tamin’ny tranony. Eo ihany koa ireo mbola midongy hijanona eny ihany.
Fampiharana ny fihibohana Miha mihenjana tanteraka ny fanjakana
Toromarika amin’ny fampiasana raokandro
Fotoam-pahavaratra :: Rindrin-trano nazeran’ny orana mikija teny Avaradoha
Fisorohana aretina « coronavirus » :: Miato ny sidina mivantana mampitohy an’i Nosy Be sy Italia